December 9, 2016 अम्बिका ग्यालरी
पोखरा / नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भाषण सुरु गरेको दुई मिनेट पनि भएको थिएन । भाषण सुनिरहेको भीडबाट एक युवा उठे र कालो झन्डा देखाए ।
भट्टराईले उनलाई देखे । अनि भने, ‘विरोध गर्न पाइन्छ ।’ भट्टराईले भाषणलाई निरन्तरता दिए । तर कालो झन्डा देखाउने ती युवालाई चारजनाले घेरिहाले । उनले तिनीहरूलाई सोधे, ‘मैले विरोध गर्न नपाउने ? ‘
खलबली मच्चियो । अरू सहभागीले उनलाई समात्न खोजेपछि आफ्नो ठाउँबाट भागे । त्यत्तिकैमा उनको जुत्ता फुत्कियो । अनि भीडबाटै कसैले भन्यो, ‘जुत्ता हान्न लागेको रहेछ ।’ कार्यक्रममै सहभागी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र समर्थित विद्यार्थीले पत्रकारहरूलाई सूचना दिए, ‘बाबुराम भट्टराईलाई जुत्ता प्रहार भयो ।’
पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा बिहीबार बाबुरामलाई त्यसरी कालो झन्डा देखाउने सञ्जीव भट्टराईलाई प्रहरीले भीडबाट निकालेर चौकी पुर्‍याउन नपाउँदै जुत्ता प्रहार भन्ने हल्ला अनलाइनहरूमा समाचार भइसकेको थियो ।
मञ्चदेखि एक सय मिटर पर सञ्जीवले ज्याकेटभित्र लुकाएर ल्याएको झन्डा देखाएका थिए । सँगै उनले बाबुरामविरुद्ध लेखिएको हस्तलिखित पम्प्लेट पनि देखाएका थिए । पम्प्लेटमा उनले ‘बाबुराम भट्टराईको नैतिक पतनमा विद्यावारिधि’ लेखेका थिए ।
सञ्जीव पृथ्वीनारायण क्याम्पसकै विद्यार्थी हुन् । कैलाली घर भएका उनले नेताहरूप्रति वितृष्णास्वरूप विरोधमा कालो झन्डा देखाएको बताएका छन् । ‘हामी सबै नेपाली द्वन्द्वपीडित हौं’, उनले भने, ‘जनयुद्धले देशलाई पछाडि धकेल्यो ।’
मञ्चकै अगाडिपट्टि उठेर बाबुरामविरुद्धको पम्प्लेट र कालो झन्डा देखाएपछि सञ्जीवलाई नयाँ शक्तिका विद्यार्थीले समात्न खोजेका थिए । ‘तर उनी भागिहाले र जुत्ता फुत्कियो,’ कार्यक्रमका एक सहभागी सौगात पोखरेलले भने, ‘कालो झन्डा देखाएका हुन्, जुत्ता हानेका होइनन् ।’
स्वयं सञ्जीवले समेत आफूले बाबुरामलाई जुत्ता नहानेको बताएका छन् । बाबुरामलाई मात्रै नभई ठूला नेतालाई आफूले विरोध गर्ने अभियान चलाउन लागेको सुनाए । ‘आज त्यसको सुरुआत गरेको मात्रै हुँ’, उनले भने, ‘बाबुरामलाई जुत्ता हानेको होइन, योजना पनि थिएन ।’
नेता भट्टराईले पनि आफूलाई कसैले जुत्ता नहानेको बताएका छन् । काठमाडौं फर्कनुअघि पोखरा विमानस्थलमा पत्रकारसँगको भेटमा उनले कालो झन्डा देखाइएको भने पुष्टि गरे । ‘उहाँले कालो झन्डा देखाउनुभयो’, उनले भने, ‘मैले उहाँलाई कालो झन्डा देखाउन दिनुहोस्, म आफैंले पनि कालो कोट लगाएको छु, कालो झन्डा देखाउँदैमा केही हुँदैन भनेको थिएँ ।’
लोकतन्त्रमा त्यस्तो खाले विरोधलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने पनि उनले बताए । यस्ता असन्तुष्टि तीन करोड नेपालीमा रहेको भन्दै उनले सबैलाई सन्तुष्ट पार्न नसकिने धारणा राखे । आफूलाई कालो झन्डा देखाउनेलाई प्रहरीले पक्रिएको थाहा पाएपछि उनलाई छाडिदिन भनेको पनि डा. भट्टराईको भनाइ छ । सञ्जीवलाई दिनभर नियन्त्रणमा राखेर साँझ छाडिएको प्रहरी निरीक्षक किशोर लम्सालले जानकारी दिए । – केशवशरण लामिछाने , अन्नपूर्ण पोस्ट